Ukuhlaziywa kwe "Diary of Wimpy Kid: I-Straw Last"
Eminye iMiddle School Humor
Kwisihlandlo sesithathu sikaJeff Kinney "kwiveli", kwiDayari ye-Wimpy Kid: I-Straw Stw , umfundi wesikolo esiphakathi uGreg Haffley uqhubeka nesigxina sokuphila kwakhe. Kwakhona, njengoko wenza kwiDayari ye-Wimpy Kid kunye kwiDayari ye-Wimpy Kid: i-Rodrick Imithetho , uJeff Kinney wenze umsebenzi oyingqiqo, ngamazwi nemifanekiso, ngokubonisa ukugqithisa okuqhelekileyo okuza kuba ngumntu ozikhukhulayo kunye nezinto ezimnandi ezenzekayo ngenxa yoko.
Idayari ye-Wimpy Kid: I-Straw Last : Ibali
UGreg uqala idayari yakhe ngokukhalaza malunga nendlela ezenziwa ngayo iintsapho zakhe zintshukumo zokuNyusa uNtsha. Umntakwabo omncinci uyaqhwaba ngenxa yokuba ulahlela i-pacifier yakhe; Uyise unobungozi ngenxa yokutya, kwaye umama ugqoke iimpahla zokuhlambalaza. UGreg ukhononda nokuba ilungu lentsapho elidinga ukuphucula kakhulu-umzalwana wakhe uRuderick - akenzanga izigqibo kuzo zonke. Ngokuphathelele uGreg, "Hayi, ingxaki kukuba, akulula ukuba ndicinga ngeendlela zokuziphucula ngokwam, kuba sele ndingomnye wabantu abalungileyo endaziyo."
Idayari iyaqhubeka neendinyana malunga ne-Greg's antics esikolweni nakwikhaya njengoko ezama ukuphepha emsebenzini, ukuhlamba iimpahla zakhe, kunye neenzame zikayise zokumenza abe njengabantwana bakhe, ababenomdla kunye nabadlali abafanelekileyo. Ukugxininiswa kwiDayari ye-Wimpy Kid: I-Straw Straw igxininise ngakumbi kwi-st's yokwakheka kunye nomntakwabo omdala kunye nokunye okukhuselayo kunye noyise kunye nentando yakhe ebandayo kwimantombazana, ngokukodwa, intombazana egama linguHolly Hills.
Phakathi kokujoyina i-Boy Scouts kunye neenkampu zokuzama ukukholisa uyise kunye nokucinga iinjongo zokutsala uHolly, uGreg ungumfana oxakekile. Ekupheleni kwencwadi, kukho ukuphela okuvuyisayo, okutsho ngoGreg, kufana nokuba kufanelekile. Emva kwakho konke njengoko uGreg uthi, "Andiyazi umntu ofanelwe ukubamba ikhefu ngaphezu kwam."
Idayari ye-Wimpy Kid: I-Straw Last : Incomo yam
I-Tweens kunye nentsha ukusuka kwibakala lesine ukuya kwisikolo esiphakathi yenze yonke incwadi kwiDayari yechungechunge lweWimpy Kid . Ngoba? Njengoko ndithe ndatsho ngaphambili, "Ndicinga ukuba kugxininisa kwiinkxalabo ezithathayo kunye nentsha eneneni, enikezwe ngongoma kunye nombono ohle kakhulu, owona mlingiswa obalaseleyo, uGreg Heffley, ochaza ibali ngokungena kwakhe kwidayari. Abantwana bayazibona ngokwenene noGreg, u-goofy, ozimeleyo kunye nohlekisayo esikolweni osebenza kunye neengxaki ezahlukeneyo, ezininzi ezenzayo. "
Njengayezinye iincwadi eziluhlu , ndiyincoma ukuba kubantwana abatsha nabaselula. Ukuba unomfundi onqabileyo kwintsapho yakho, unokumangaliswa kukuba banomdla kangakanani ekufundeni iDayari ye-Wimpy Kid: I-Straw Last kanye nezinye iincwadi eziluhlu. Nangona akudingekile ukuba ufunde iincwadi kwi-series ukuze uzonandipha, ndincoma ukuba wenze njalo. Ngokwakha ngolwazi lwabo ngoGreg nentsapho yakhe kunye nabahlobo baloo ncwadi yokuqala, abafundi baya kufumana ulonwabo olukhulu kwiincwadi nganye. (Iincwadi ze-Amulet, Imprint kaHarry N. Abrams, Inc. 2009. I-ISBN: 9780810970687)
Konke Okufuneka Ukwazi Ngo-Clifton Chronicles
"I-Raisin kwiLanga" UMthetho weBini, iSavey Summary and Guide Guide
"I-Raisin kwiLanga" UMthetho we-III Inkcazo yeSishwankathelo kunye nesiKhokelo soFundo
Ihlabathi likaRamona nguBeverly Cleary
I-Flora ne-Ulysses Book Review
I-Big Nate zamaBakala aphakathi kweBakala kunye neeKhathuthi
Iincwadi Ezintsha ezivela kuJames Patterson
Ukuvuna inyanga: iNyanga yeNyanga kaSeptemba
Ukukhuselwa kweNkuthalo yokuShukela
Abaphathi bee-Presidents Bafuna uMongameli kunye noLost
Okuchaseneyo - Inkcazo yesiFrentshi ichazwe
Umqhubi - Ukunyusa
Intlawulo yoMkhuseli we-Smoot-Hawley ka-1930
I-Tuck Xa i-Upside-Down kwi-Kayak
'Ixesha elimnandi elixoki' Ixesha 2 iiHlathi zeHlabathi
Ukuthetha Ngokubambisana: Isingeniso Sokuhlalutya Ingxoxo